Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Shuruudaha Tallaalka Cusub ee Kanada
Dowladda Kanada waxaa ka go'an inay ilaaliso waaxdayada gaadiidka, oo ay ku jiraan shaqaalaha iyo socotadaba ammaan iyo ammaan. Talaalku waa difaaca ugu fiican ee ka dhanka ah COVID-19 iyo noocyadiisa. Taasi waa sababta shaqaalaha iyo socotada ku jira qaybaha hawada iyo tareenada ee ay federaalku maamusho ay u baahan doonaan in laga tallaalo COVID-19.
Shuruudaha waxay dhaqan galayaan Oktoobar 30
Sida dawladda Kanada ay ku dhawaaqday Ogosto 13, dadka safarka ah ee ku jira qaybaha hawada iyo tareenada ee federaalku maamusho waxay u baahan doonaan in laga tallaalo COVID-19. La tashi dheer ka dib, Transport Canada waxay soo saartay amaradii ugu dambeeyay iyo hagitaan shirkadaha diyaaradaha iyo tareenada si ay u fuliyaan shuruudaha tallaalka ee socotada kuwaas oo dhaqangal ah 3 AM (EDT) Oktoobar 30, 2021 Shuruudaha tallaalka ayaa lagu dabaqi doonaa dhammaan socotada 12 sano jir iyo lagu daray afar bilood oo kala ah:
• Rakaabka hawada ee ku duulaya gudaha, xudduudaha, ama duulimaadyada caalamiga ah ee ka dhoofaya garoommada Kanada qaarkood; iyo
• Rakaabka tareenka ee VIA Rail iyo tareenada Rocky Mountaineer.
Dadka safarka ah waxay u baahan doonaan inay tusaan shirkadaha diyaaradaha iyo tareenada caddaynta tallaalka. Muddo gaaban oo kala-guur ah ilaa Noofambar 29, 2021, socdaalayaashu waxay haystaan ​​ikhtiyaarka ah inay muujiyaan caddaynta COVID-19 shaybaarka unugyada si ay u fuulaan. Shirkadaha diyaaradaha iyo tareenada ayaa mas'uul ka noqon doona xaqiijinta heerka tallaalka dadka safarka ah. Habka duulista, Hay'adda Ammaanka Gaadiidka Cirka ee Kanada (CATSA) waxay sidoo kale taageeri doontaa hawl-wadeennada iyagoo xaqiijinaya heerka tallaalka.
Waxaa jiri doona wax yar oo ka reeban xaaladaha degdega ah iyo deegaamaynta gaarka ah ee bulshooyinka fogfog ee loo qoondeeyey si ay dadka deegaanka u sii wataan helitaanka adeegyada muhiimka ah.
Shuruudaha waxay dhaqan galayaan Noofambar 30
Laga bilaabo Noofambar 30, tijaabada molecular COVID-19 taban looma aqbali doono beddelka tallaalka. Haddii dadka socotada ah aysan horay u bilaabin habka tallaalka, ama aysan u bilaabin si dhaqsi ah, uma qalmi doonaan inay safraan laga bilaabo Noofembar 30. Waxaa jiri doona kaliya ka-dhaafitaanno xadidan. Macluumaad dheeri ah ayaa la bixin doonaa toddobaadyada soo socda.
Intaa waxaa dheer, waxaa jiri doona tallaabooyin ku-meel-gaar ah oo loogu talagalay dadka ajnabiga ah ee aan la tallaalin ee sida caadiga ah deggan meel ka baxsan Kanada oo soo galay Kanada ka hor Oktoobar 30. Ilaa Febraayo 28, waxay awoodi doonaan inay raacaan duulimaad ujeeddadu tahay Kanada haddii ay muujiyaan caddaynta tijaabo molecular COVID-19 sax ah wakhtiga safarka.
Dawladda Kanada waxay sii wadi doontaa la shaqaynta daneeyayaasha muhiimka ah, loo-shaqeeyayaasha, shirkadaha diyaaradaha iyo tareenada, wakiilada gorgortanka, Dadka asaliga ah, maamulada maxalliga ah, iyo gobolada iyo dhulalka si ay u taageeraan hirgelinta shuruudaha tallaalka.